लेवान्डोस्कीलाई बेस्ट फिफा अवार्ड, रोनाल्डोलाई स्पेशल अवार्ड ! मेस्सीलाई हाता लाग्यो सुन्ना - MeroKhelkud
२०७८ माघ ४ गते २०७८ माघ ४ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर145LeaveaComment on लेवान्डोस्कीलाई बेस्ट फिफा अवार्ड, रोनाल्डोलाई स्पेशल अवार्ड ! मेस्सीलाई हाता लाग्यो सुन्ना
काठमाडौं । बायर्न म्युनिख तथा पोल्याण्डका स्ट्राइकर रोबर्ट लेवान्डोस्की सन् २०२१ को बेस्ट फिफा अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी चुनिएका छन् । ६९ गोल गरेका ३३ वर्षीय खेलाडीले लगातार दोस्रो वर्ष यो उपाधि जितेका हुन् ।
उनले लिभरपुलका मोहमद शलाह र पेरिस सेन्ट जर्मेनका लियोनेल मेस्सीलाई पछि पारे । लेवान्डोस्कीले हालैमात्र गर्ड मुलरको बुन्डेस लिगामा एकै वर्षमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने ४९ वर्ष पुरानो कीर्तिमान भंग गरेका थिए । उनले ३४ खेलमा ४३ गोल गर्न सफल भएका थिए ।
चेल्सीलाई च्याम्पिन्स लिगको उपाधि दिलाएका प्रशिक्षक थोमस टुकलले उत्कृष्ट प्रशिक्षकको उपाधि जिते । चेल्सीकै एडुवार्ड मेन्डी उत्कृष्ट गोलकिपर बने । डेनमार्कको राष्ट्रिय टोलीले बेस्ट फिफा फेयर प्ले अवार्ड पायो भने इमा हेयस वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडी चुनिइन् ।
उता रोनाल्डोलाई सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ता भएको अवसरमा विशेष अवार्ड दिइएको थियो । एरिक लामेलाले उत्कृष्ट गोलका लागि पुस्कास अवार्ड प्राप्त गरे । बार्सिलोनाकी एलेक्सियाले उत्कृष्ट महिला खेलाडीको उपाधि जितेकी छन् । यसैगरी चेल्सीका थोमस टुचेलले उत्कृष्ट प्रशिक्षक र चेल्सीकै एडवार्ड मेन्डी उत्कृष्ट गोल रक्षकको उपाधि जितेका छन् ।
२१ बर्षपछि बार्सिलोना छोड्दा निकै बेर भक्कानिए मेस्सी
२०७८ श्रावण २४ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
दुई गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा लिभरपुल चेल्सीसँग रोकियो
२०७८ पुष १९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
यी हुन् युरोकपको इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने १० खेलाडीहरु